Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Madaxweynihii hore Somalia (Daawo Sawirada)…July 10.18 | Salaan Media
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Madaxweynihii hore Somalia (Daawo Sawirada)…July 10.18
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa kulan gaar ah waxa uu Caasimada dalka Turkiga ee Ankara kula yeeshay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Labada Madaxweyne ayaa intii uu kulankooda socday waxa ay kaga wada hadleyn arimo badan oo muhiim ah ay ku jiraan iskaashi iyo wada shaqeyn dhax marta madaxda haatan iyo kuwii hore .
”Waxaan maanta kula kulmay magaalada Ankara Madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaanu iska wareysannay horumarka, fursaddaha iyo caqabaddaha horyaalla dalkeenna, annaga oo isla qaadannay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga iyo wada shaqeynta madaxda haatan iyo kuwii hore ee dalka si loo xaqiijiyo mustaqbal barwaaqo u horseeda dadkeenna.” Ayuu kusoo qoray bartiisa Twitterka Madaxweyne Farmaajo .
Kulankan ay yeesheen Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili ay soo baxayeen Warar sheegaya in Xasan Sheekh uu Hormuud u noqonayo isbaheysi Mucaarad ku ah Dowlada uu Farmaajo hogaamiyo.
Daawo:Madaxwayne Biixi oo La Kulmay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya..Feb 19.19